Nyefee SMS, Music, Video, foto na kọntaktị site na iOS ka Samsung
Nyefee SMS, Music, Video, Photos, Kalinda na Ndi ana-akpo si iOS ka Samsung
Ịmafe site na iOS ngwaọrụ Samsung, ma naanị na-ahụ na i achọpụtabeghị otú nyefee data n'etiti ha? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị na-eju anya,, ị na-nri ebe. Isiokwu ga-agwa gị otú ị nyefee kọntaktị, video, foto, music na SMS si iOS ka Samsung na ala.
Ngwọta 1. Nyefee music, video, photos, kalenda, na kọntaktị na SMS si iOS ka Samsung na MobileTrans
Ngwọta 2. Copy iOS ngwaọrụ Samsung na Samsung Smart Gbanye
Ịgbanwee iOS ka Samsung, Ọ dịghị hassle
Nyefee ọdịnaya n'etiti iDevice na gam akporo igwe na 1 click
Nyefee na kọntaktsị na iDevice, Gmail, iCloud, Hotmail, Yahoo !, na ihe Samsung na 1 Pịa.
Bugharịa kalinda na iOS ebe nchekwa ekwentị na iCloud ka Samsung na ala.
Detuo SMS na akụkụ na iMessages on iOS ngwaọrụ Samsung.
Bugharịa photos na tọghata ọdịyo na video ka Samsung maka Michael na-ekere òkè.
Ndabere gị iOS ngwaọrụ PC, otú i nwere ike weghachi gị Samsung mgbe e mesịrị.
Ukwuu n'ihi na iPhone, iPad, iPod aka na nza nke Samsung ngwaọrụ. Mụtakwuo >>
Gaa Mac version - Wondershare MobileTrans maka Mac.
1-Pịa Nyefee, Ya mere, Fast
Ọ dị mfe iji na nnọọ ngwa ngwa. Dị ke otu click, niile data na gị iOS ngwaọrụ ga-zigara gị Samsung.
Nyefee na Ndi ana-akpo, SMS, wdg
Ọ na-emekarị gị niile data, ya bụ kọntaktsị, kalinda, music, video, foto na SMS, anya iOS a na ngwaọrụ Samsung enweghị ihe ọ bụla hassle.
Ihe ọ bụla ekwentị ebu bụ, ọ na-enyere aka ọma nyefee faịlụ site na iOS ka Samsung enweghị ihe ọ bụla ajụjụ.
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite
Gị Samsung bụ na iji? Echegbula. Ị nwere ike ndabere gị iOS ngwaọrụ ahụ na mbụ weghachi gị Samsung mgbe e mesịrị. (Nani Windows version eme)
Nyefee iOS na ngwaọrụ Samsung
Ndabere iDevice, Weghachi Samsung
Iji kpọmkwem nyefee kọntaktsị, kalinda, video, music, SMS na foto site na iOS ka Samsung, ị ga-enwe gị iOS ngwaọrụ ihe Samsung nọ gị n'aka n'otu oge.
Nzọụkwụ 1. Wụnye Wondershare MobileTrans on Computer
Mbụ, ibudata na wụnye ngwá ọrụ na kọmputa. Na-agba ọsọ ka ọ na-egosi ya bụ isi window. Họrọ ekwentị na ekwentị mode.
Cheta na: Biko wụnye iTunes na kọmputa. Naanị otú a pụrụ Wondershare MobileTrans arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iOS Ngwaọrụ na Samsung ka Computer
Jikọọ gị ma ngwaọrụ na kọmputa na-agba ọsọ Windows OS ma ọ bụ Mac OS X site na eriri cables. Ozugbo ọma ahụrụ, ma ngwaọrụ ga-gosiri na window.
Tinye akà rà Doro Anya data tupu oyiri mgbe ị chọrọ iji wepụ ẹdude data na gị Samsung onwe elu ohere maka data si iOS ngwaọrụ
Nzọụkwụ 3. Nyefee Ndi ana-akpo, SMS, Music, Kalinda, Foto na Video si iOS ka Samsung
Ike iṅomi ọdịnaya gosiri na n'etiti-eme ka n'aka ihe ị chọrọ. Pịa Malite Copy. N'oge transfer usoro, cheta bụghị ịkwụpụ ma ngwaọrụ. Mgbe usoro-abịa na njedebe, pịa OK.
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ nwere gị iOS ngwaọrụ na aka ma ka na-eche gị ọhụrụ Samsung, otú a bụ nri maka gị.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị Ngwá Ọrụ mgbe nwụnye
Wụnye ngwá ọrụ na kọmputa na-agba ya. Ọ bụrụ na ị na-enweghị iTunes arụnyere na kọmputa, biko wụnye ya. Gaa na nkwado ndabere My ekwentị mode.
Nzọụkwụ 2. ndabere gị iOS ngwaọrụ ka na kọmputa
Jikọọ gị iOS ngwaọrụ, na-ekwu, iPhone, iPad na iPod aka, na kọmputa. Gị iOS ngwaọrụ a ga-emere na ekpe ya na-akwado ọdịnaya ticked. Gaa Malite Copy nkwado ndabere na mpaghara gị chọrọ ọdịnaya gaa na kọmputa.
Nzọụkwụ 3. Weghachi nkwado ndabere na mpaghara File Gị Samsung Ngwaọrụ
Kwupu gị iOS ngwaọrụ-esi na gị Samsung ngwaọrụ njikọ. Mgbe ghọtara ịga nke ọma, gị Samsung ngwaọrụ ga-egosi na nri. Laghachi n'ụlọ peeji nke na-ahọrọ Weghachi si Backups mode. Iweghachi window,-aga n'aka ekpe panel na họrọ a ndabere faịlụ (ọ pụrụ ịbụ iPhone, iPad ma ọ bụ iPod emetụ ndabere faịlụ.) Lelee gị chọrọ ọdịnaya n'etiti. Pịa Malite Copy iji weghachi nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị Samsung ngwaọrụ.
Ịgbanwee Data si Samsung ka iPhone
Ibufee ọdịnaya site na iPhone ka Samsung
Akwagakwa faịlụ site Nokia ka Samsung
Copy faịlụ site HTC ka Samsung
Ibufee ọdịnaya site na iPad ka Samsung
Copy Data si gam akporo ka iOS
Bugharịa Files si gam akporo ka Samsung
Nyefee Data si Blackberry ka Samsung
Wụnye / Uninstall / Update Kies on PC
Wụnye / Uninstall / Update Kies on Mac
Jiri Samsung Kies Ka idetuo Files
Samsung Smart Gbanye
Chọrọ ịkwaga data si iOS ngwaọrụ ọhụrụ Samsung Galaxy ekwentị, dị ka S5, n'ihi na free? Samsung Smart Gbanye abịa maka gị. Ọ nwere ike na nyefee kọntaktị, ozi, photos, memos, kalenda na ndị ọzọ site na iOS ngwaọrụ.
Uru: n'efu cons: 1. Nanị na-akwado ụfọdụ Samsung ngwaọrụ, dị ka Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Obere, Samsung Galaxy Cheta na ndị ọzọ. 2. Were oge ndabere gị iOS ngwaọrụ iTunes mbụ.
Nzọụkwụ 1. Iji iTunes nkwado ndabere na mpaghara gị iOS ngwaọrụ na kọmputa. Ọ bụrụ na ị nwere ndabere faịlụ, kwuo na nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 2. Run Samsung Smart Gbanye na kọmputa na jikọọ gị Samsung ekwentị na kọmputa na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 3. Na window, họrọ a ndabere faịlụ site na iOS ngwaọrụ. Pịa Next. Lelee ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Mgbe ahụ, pịa Malite Nyefee na-amalite.
Mụta ihe banyere Samsung Smart Gbanye >>
> Resource> iOS> Easily Nyefee SMS, Music, Video, Photos, Kalinda na Ndi ana-akpo si iOS ka Sam